mon - fri: 10am - 7pmkuhlala - ilanga: 10am - 3pm
Indawo Enzima Forklift
Isixhumi Sokukhonkolo Esizimele
Isihlanganisi Esizimele Esikhonkolo esinganqatshwa
I-Self Loading Concrete Mixers engeke yenqatshwe Eminyakeni yamuva nje yamaphrojekthi wobunjiniyela, i-Self Loading Concrete Mixersr iya ngokuya ikhula. Noma emadolobheni, emadolobheni, noma ezintabeni, ungahlala ubona "ukuma" kwayo okuncane nokuguquguqukayo, okuhlelekile nokuzenzakalelayo kwe-Feedi ...
Uyawazi amathiphu ayisithupha okuba ngumphathi omuhle we-Front End Loader?
Isisebenzisi esihle seFront End Loader singakwazi ngokusobala ukuthi umshini uwusebenzisa kanjani lapho ushayela umlayishi, unciphisa ukugqoka komshini, unciphisa ukusetshenziswa kukaphethiloli, futhi uqedela umsebenzi ngokushesha nangokushesha. Izeluleko ezilandelayo eziyisithupha zizokukwenza ube ngumqhubi omuhle wokulayisha! Woza uzobheka. 1. Ukukhanya Lapho i-Front End Loader ...
Yiziphi izici zohlelo lokuqondisa amasondo weW Wheel Loaders?
Njengamanje, uhlelo lwethu lokuqondisa umfutholuketshezi lwama Wheel Loader lusebenzisa uhlelo oluvulekile lwamapompo, olubonakala ngesakhiwo esilula nangokushabalalisa ukushisa okwanele. Isistimu yokubacindezela yokuqondisa ihlukaniswe ngohlelo lokuhlangana kanye nohlelo olungahlangene. Uhlelo lweConfluence lubhekisa ku ...
Ukusebenza kweLoader amathiphu ayisithupha okwenza ube umqhubi omuhle wokulayisha
Umqhubi ophethe kahle angakwazi ngokucacile ukuthi angawusebenzisa kanjani kakhulu umshini lapho eshayela umlayishi, anciphise ukugqoka komshini, anciphise ukusetshenziswa kukaphethiloli, futhi aqedele umsebenzi kahle futhi ngokushesha. Izindlela eziyisithupha zokwenza ube ngumqhubi ophethe kahle Lezi zeluleko ezi-6 ezilandelayo zizokukwenza ube ngumqhubi ophethe kahle! Woza ...
Isigaba seLehman: Kusetshenziswa Amakhono Wokuthwala Kokusebenza Okuyisithupha
I-Loader uhlobo lomhlaba ozilayishayo kanye nokulayisha ngamatshe nokulayisha imishini esetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi wokwakha afana nemigwaqo emikhulu, ujantshi, ukwakhiwa, ugesi, amachweba, izimayini, njll. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukwenza izinto zokwakha ngobuningi ezifana nenhlabathi, isihlabathi, umcako, namalahle. Gumba kancane insimbi ...
SHANYI LENHAM “shine” 2019 China (Qingdao) International Exhibition Machinery Exhibition WAFIKA
Kusukela ngo-Okthoba 30 kuya kuNovemba 1, i-China China International Agricultural Machinery Exhibition, exhaswe yiChina Agricultural Machinery Circulation Association, China Agricultural Mechanization Association, neChina Agricultural Machinery Industry Association, ibiyi-h ...
Izici Zomkhiqizo we-Shanyi Lehman
Irediyetha enkulu kakhulu: Irediyetha isebenzisa uhlelo lwamazwe omhlaba oluzihambile lokushisa ukushisa oluzimele ukuqinisekisa ikhwalithi kawoyela nokulawula izinga lokushisa. Irediyetha eyenziwe ngobukhulu bomuntu: I-Radiator isebenzisa uhlelo olupholile lokupholisa oluzimele lwamazwe omhlaba ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yokuhlunga uwoyela ...
Ukuqamba kushintsha igama, ikhwalithi idala ikusasa! Shan Yi imishini LTD, elise Laizhou, esifundazweni Shandong, yasungulwa ngo-1990 S. Le nkampani ihlanganisa indawo 4000 sqm futhi has imodemu ukukhiqizwa workshop 20000 sqm nge utshalomali ingqikithi yuan 200000000, kuba ibhizinisi onguchwepheshe ukukhiqizwa kwamaloli kanye namaloli wokuxuba okuzondla wena. Ikhiqiza amaloli angama-50000 kanye namaloli angama-8000 wokuzondla
14 Agasti, 20
Isihlanganisi Sezokuthutha, Ukhonkolo Wokuxuba Ukhonkolo, Self-Iyalayisha Mixer Truck, 2021d Isondo Loader, Isondo elilayisha ezine, Ama-Bell Wheel Loader,
Ikheli: IShahe Industrial Park, iLaizhou City, iSifundazwe saseShandong